Mana isan’andro – Talata 07 Jolay 2015 – Athis Fanantenana
Mana isan’andro – Talata 07 Jolay 2015
7 jolay 2015
Efesiana, Eksodosy, Galatiana, Genesisy, Malakia, Romana
1. Mana_07072015 - Romana 9.1
ROMANA 9. 1-13 F. 6
Ny fiasan’ny Fanahy Masina tao anatin’Paoly, no naha-tery azy te-hamonjy ireo rahalahiny, havany araka ny nofo (1-3), izay, na dia manana ny teny fikasàna aza, dia tsy voatery hahazo tombony amin’izany (4-5). Israely, dia firenena voafidin’Andriamanitra tao anatin’ny taranak’i Abrahama. Maro amin’izy ireo anefa, tsy mba manana izany teny fikasàna izany, satria tsy manaiky an’i Jesosy Kristy ho zanak’Andriamanitra sady Andriamanitra tokoa, ka very. I Paoly, jamba ara-panahy taloha, fa lasa mahiratra, ary mahatsapa ny hatsaran’ny miaina ao amin’i Kristy. Izany no maha-ory ny fanahiny, mahita ireo mpiara-belona aminy mbola maizina sy very.
Ny taranak’i Abrahama (Genesisy 15. 5), dia mizara roa mazava tsara (6-13, Galatiana 4. 22-31) : ao ny voafidin’Andriamanitra hatramin’ny voalohany, ireo dia ny finoany no isaina ho fahamarinany hahazoany famonjena. Ireo no zanaky ny teny fikasàna. Ao koa anefa ireo izay tsy nankasitrahany (10-13) (Malakia 1. 2-3) ka nataony hoe : zanaky ny fahatezerana (22), satria mandà ny Zanany. Fandaharan’Andriamanitra tsy takatry ny saintsika izany ary fanehoany ny heriny sy ny fahefàny ary ny safidiny (Romana 11. 7-8). Be famindrampo anefa Izy, ka na dia tsy voafidy araka ny teny fikasàny aza, nefa manaiky sy mandray an’i Jesosy, dia isaina ho mpandova koa (Eksodosy 33. 19b).
Isika dia isan’ireo jentilisa tonga voavonjy (Galatiana 3. 26-29). Maro ireo mpiara-belona amintsika no mbola ao anatin’ny aizina. Andeha hitory sy hivavaka ho azy, mba ho tonga mpiray lova amin’i Kristy koa izy ireo (Efesiana 3. 4-11).
Mofon'aina - Talata 07…